Blog - Xarago
Sida Loo Isticmaalo Ciyaaraha Twitch si Lacag Loogu Ururiyo Deeqaha?
Lacag ururintu maaha sidii ay ahaan jirtay. Internetka, lacag ururinta dhijitaalka ah ayaa gaadhay heer kale. Dhab ahaantii, waxaa jira dhowr goobood oo bixiya ikhtiyaarka ah in lacag loogu ururiyo deeqaha. Mid ka mid ah…
Talooyin ku saabsan doorashada muusigga ku habboon qulqulkaaga Twitch
Ciyaarta ciyaaraha fiidyaha waxay qaadataa shaqo badan. Haddii aad u fiirsato durduriyayaasha ugu sarreeya, waxaad ogaan doontaa inay maareeyaan inay yeeshaan goobta dagaalka iyagoo siinaya sheeko xigmad leh dhagaystayaashooda….
Waa maxay sababta Twitch ay u tahay kanaal weyn oo loogu talagalay Beauty Vloggers si ay isugu dayaan isbeddellada isqurxinta
Muddo dheer, bloggers quruxda waxay ku haysteen YouTube iyo Facebook kaliya. Markii ay soo shaac baxeen Instagram iyo Instagram reels, vloggers quruxda waxay heleen meel cusub. Si kastaba ha noqotee, vloggers quruxda ayaa hadda arkaya suurtagalnimada…
Xeeladaha ugu Wanaagsan ee lagu socodsiiyo Ololaha Xiriirinta ee Twitch
Cunista warbaahintu waxa ay soo martay isbeddel weyn sannadihii la soo dhaafay. Dadka intiisa badan waxay wax ku hagaajiyaan khadka si ay u daawadaan durdurrada iyo waxyaabaha kale ee dhijitaalka ah. Twitch waa madal baahinta tooska ah oo badashay…
Talooyin ku saabsan Uruurinta Hogaaminta Summadaada Marka aad ku ciyaareyso Twitch
Twitch waa madal baahinta ciyaaraha aasaasiga ah. Waxaa iska leh Amazon, Twitch wuxuu dhawaan ku qarxay caannimadiisa. Ilaa hadda, Twitch wuxuu helaa 30 milyan oo soo booqda maalin kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira 150,000 oo qulqulaya…
5-ta Ciyaarood ee Saaxiibtinimo ee Bulshada & Qoyska ugu Sarreysa ee lagu Ciyaaro Twitch
Madal fiidiyoow ah oo khadka tooska ah, Twitch, oo markii ugu horreysay la bilaabay Juun 2011, ayaa tan iyo markaas u kortay mid ka mid ah aaladaha ugu caansan ee ciyaartooyda internetka. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Statista,…
Xeeladaha Keyword Smart ee Calaamadaha Twitch
Sanadihii la soo dhaafay, Twitch wuxuu isu taagay inuu yahay mid ka mid ah aaladaha fiidyaha-fidiyaha ugu weyn adduunka. Maalin kasta, isticmaaleyaal aad u tiro badan oo 15 milyan ah ayaa la socda masraxa si ay u helaan hagaajintooda waxa ku jira muuqaalka….
Siyaabaha Loogu Dhiiri Geliyo Taagerayashaada Twitch-ga inay ka Iibsadaan Muusigga Socodkaga Muusiga
Tan iyo markii qulqulka khadka tooska ah ee muusiggu uu noqday isha aasaasiga ah ee dhagaystayaasha, ciyaarta gabi ahaanba way isku bedeshay warshadaha muusiga. Waxaa laga caawiyay kordhinta kartida dhaqaale ee fannaaniinta madaxa-bannaan iyo…
Hagahaaga si guul leh ugu kobcinta bulshada wax-akhriska ee Twitch
Sanadihii la soo dhaafay, Twitch wuxuu u soo baxay inuu yahay mid ka mid ah aaladaha ugu waaweyn ee baahinta tooska ah. Daawashada tooska ah ee ugu caansan masraxa ayaa ah tabinta ciyaaraha xiisaha iyo xawliga leh ee nooca 'Aan ciyaarno'. Bulshada ciyaaraha Twitch…
Waxaan Bixineynaa Adeegyo Suuq Badan
Kala iibsasho hal mar ah oo aan lahayn liisanka ama lacagta soo noqoshada
Adeegyada Twitch Adeegyada Instagram Adeegyada Twitter Adeegyada Pinterest Adeegyada YouTube Adeegyada Spotify Adeegyada SoundCloud
Followers Muuqaalada Channel
Natiijooyinka Way Sii Socdaan Ilaa Dhameystiran
Adeegyada Instagram, fadlan booqo websaydhka aan wada-shaqeyno, MrInsta.com. Halkan guji si aad u aragto adeegyadooda Instagram
Followers jecel yahay
Riwaayado Liiska Ciyaartoyda Followers
Riwaayado downloads Followers jecel yahay Comments Dib udhacyada
Adeegyada YouTube-ka, fadlan booqo websaydhka wehelkayaga ah, SubPals.com. Halkan guji si aad u aragto adeegyadooda YouTube